Kaalinta Bulshada Ay Kaga Jiraan Gabdhaha Soomaaliyeed! |
Muslimo Cabdullaahi — September 28, 2018
Bulshada waxa ay ka koobantahay qaybo kala duwan oo fara badan, gabdhahana waa qayb ka mid ah oo laf dhabar ah. Si guud markaan ugu hadlo haweenka, waxa ay ku leeyihiin bulshda Soomaaliyeed doorwayn oo aan halkaan lagu soo koobi karin. Gabdhahana waa sidoo kale oo waxa ay ku jiraan tariikhda baal dahabi ah oo dhanka bulshda hormarintiisa ah, sababtoo ah waa kuwa u haylan markasta in ay qadaan masuuliyada reerkooda iyo reerka loo guuriyey. Oo ay usii dheer tahay in ay ka qayb qataan howlaha horumarinta dalka.
Waxaa dhacda gabdhaha in ay noqdaan kuwa ka fikira reerkooda in badan, oo shaqeeyaan waxbadan si ay reerka u garab istagaan. Xittaa kuwa ku waayey mustaqbalkooda guri ay ku yeelan lahayeen ayaa jira, sababtana waxay tahay waqtigooda intiisa badan waxa ay ku bixiyaan shaqo si ay reerkooda horumar u gaarsiyaan ama ayba kala qayb qataan reerka koriimaadka ubadka. Madaama aan ka hadlayno kaalinta ay ku leeyhiin gabdhaha Soomaaliyeed bulshada waa in aan dul istagaa waxyaabahaan soo socdo:
– Dhanka qoyska: Gabadha waa mid u haylan in ay daryeesho gurigeeda, ubadkeeda iyo ninkeeda. Waxaa dhacda ayadoo ah mid u shaqeysa reerkii ay ka dhalatay si ay dhaqaalo ugu saacido ayey hadana kasoo baxdaa masuuliyada ka saaran guriga loo guuriyey. Waxa ay tarbiyeysaa ubadka si loo helo bulsho wanaagsan waana kaalin muhiim ah. Qoyska ay kasoo jeedo kaliya dhaqaalo kuma soo kordhiso ee xitaa waxa ay muujisaa wax qawad dhanka guriga howlihiisa ah.
– Waxbarashada: Gabdhaha waxa ay ka qataan kaalin wayn dhanka waxbarashada, waxaa la arkaa gabdho badan oo barayaal ah si ay wax u baraan bulshada qaybaheeda kala duwan. Waayadii horre way yarayeen gabadha waxbartay in la arko laakiin mudooyinkii dambe way soo bateen gabdhaha waxbartay ee dalka usoo baxaaya.
In ay gabdhaha ka qeyb qataan waxbarashada waxa ay u sahlaysaa in ay waxbarida bulshada door wayn ka ciyaraan, isla goortaasna soo saaraan ubad waxbartay oo bulshada wax u tara. Waxaa dhacda marka la jooga goobaha waxbarashada in lagu arko gabdho dadaal badan oo xittaa galo kaalmaha ugu sareeya oo fasalka. Si kasto ay ahaato gabdhaha waxay ka qataan door wayn dhanka waxbarashada ee ugu aadan bulshada.
– Dhanka dhaqaalaha: Wadanka waxyaabaha saro u qaadi karo dhaqaalihiisa way fara badanyihiin, ganacsiga waa qeyb ka mid ah sara u qaadka dhaqaalaha dalka. Waxaa dhacda wayadaan in ay gabdho fara badan kusoo biiraan dhanka ganacsiga taasi waa waxa sare u qaadi kara ka qeeb qadashada ay ka qeeb qataan gabdhaha dhanka dhaqaalaha bulshada.
Dalka waa dal had soo kobcaayo una baahan dhaqaalo badan, waa muhiim in ay bulshada qaybaheeda kala gadisan oo idil in ay ka qeyb qaataan horumarintiisa dhaqaale. Kaliya ugama qeyb qaataan dhanka ganacsiga ee waxaa jira gabadha badan oo ka shaqeeyo shaqooyin kala duwan una taagan sidii ay reerahooda wax ugu qaban lahayeen walibo ilaa heer qaran. Waxaa jira gabdho ku maqan dalka dibadiisa oo reerahood u soo shaqeeyo, taasina waa xaalad ka qeebqadashada dhaqaale ee bulshda.
– Dhanka siyaasada: Waayadaan siyaasad waxaa lagu arkaa gabdho yaryar, taasi waxa ay dhacday dadka marka ay ka baxeen jahligii oo ay joojiyeen kal fuquuqida gabdha iyo wiilasha. In kastoo wali kala fuquuqida ay socoto laakiin waxaad modaa inyar inyar in looga sii baxaayo jahliga jinsi kala fuquuqida. Taasi marka ay yaraatay waxa ay sababtay in la helay gabdho waxbartay u haylan in ay ka qeyb qataan horumarinta siyaasada dalka. Dalka waa dal burbur ku jiray mudo wuxuu rabaa bulsho isku duuban oo aan kala faquuqid jinsi lahay si siyaasadiisa loo horumariyo.
– Doorka kuwa jooga miiga: Kaliya kuwa jooga magaalada wax masoo kordhiyaan ee waxaa jira kuwa jooga miiga oo ayagana ka qeyb qaata wax soo saarka dalka qaybihiisa kala gadisan. Waxaad arki kartaa gawar ka qayb qadanayso howlihii beeraha iyo xoolaha siddoo kale qaybaha kala duwan oo kala. Kuwa waxaa jira koriya ubadka kaligooda waxna u kariya isla goortaasna usoo shaqeey lawad dhanba miiga iyo magaalada.
Gabdhaha waxa ay kaga jiraan kaalimo fara badan horumarka bulshada, si la mid ah wiilasha ayagana door ayey ka ciyaraan dhan hormarinta bulshda. lakiin gabdhaha waxaa soo wajah caqawada fara badan oo dhan kal faquuqida gabdhaha iyo wiilasha. Taasi waxa ay aad ugu badantahay gawalo ka mid ah dalka, waxa ayn u sababtaa in ay wayso xaqii ay ku laheed bulshada. Qof xaqiisa waayey way adagtahay in uu guto xaqa uu dalka ku lahaa. Waxa ay la kulmaan aqoon yari taasi oo u sababto in ay noqoto mid xitaa aan nafteeda hormarin Karin iskaba daa in ay bulsho hormariso.
Gabar waxbarataa guul gaarta, gaarsiisana dalkeed guul. Ee gabdhaha aan ka qeyb qaadano waxbaridoo, iskasto arinka siddii hore wax ay dhaanta dhanka magaalooyinka, laakiin gobolada qaar wali xaalada waxbarida gabdhaha way liidataa. Ayadoo ay ku heraarsanyihin caqabada fara badan hada horumarkooda kuwa jooga iyo kuwa maqan halkaan lagu soo koobi karo.
Tags: Kaalinta Bulshada Ay Kaga Jiraan Gabdhaha Soomaliyeed!
Next post Foorjo Faneedka Xidigaha Geeska
Previous post Doorka Waalidku Ay Ku leeyiihin Nolosha Ardayga!